Mashiinka aan cadayan: maxaad ka ogaanaysaa mootooyinkan | Qalabka bilaashka ah
Isaac | | Qaybaha elektarooniga ah, Drones
Waxaad u badan tahay inaad maqashay matoor la'aan. Waa wax caadi ah in ereygan lagu arko sharraxaadyo badan oo alaab ah. Tusaale ahaan, gudaha drones waxaad arki kartaa in qaar badani leeyihiin matoorada koronto ee noocan ah. Xaqiiqdii, soosaarayaasha qaar waxay u adeegsadaan sheegasho macaamiisha mustaqbalka, maadaama ay leeyihiin faa'iidooyinkooda.
Laakiin waa maxay matoorkan bilaa burushka ah? Maxay ku kala duwan yihiin marka loo eego noocyada kale ee matoorrada DC. Waa hagaag kuwaa oo dhan shaki iyo inbadan waxaan isku dayi doonaa inaan ku cadeeyo qodobkaan ...
Sida noocyada kale ee Qaybaha elektarooniga ah, matoorradan waxaa si habsami leh loogu dhex dari karaa mashaariicdaada DIY guddiga arduino iyo kuwa kale
1 Waa maxay matoor aan burush lahayn?
1.1 Qaybo ka mid ah matoor aan burush lahayn iyo hawlgal
2 Xagee laga iibsadaa matoor aan burush lahayn
Waa maxay matoor aan burush lahayn?
Qaybaha mootada ee aan burushka lahayn
Burushka beddelka ee matoorrada burushka
Un matoor aan burush lahayn, ama matoor aan burush lahayn, Waa matoor koronto caadi ah oo hadda socda, laakiin ma isticmaalo burushyo si uu u beddelo kala-baxa mootada. Tani waxay ka hortageysaa dhibaatooyinka farsamada qaarkood waxayna ka hortageysaa in la beddelo. Taasi waa sababta loogu adeegsaday sheegasho, in kastoo ay run tahay inay tahay sheegasho xoogaa shaki ah, maaddaama inta badan matoorrada hadda jira ay badanaa yihiin burush la'aan.
ka matoorro koronto duug ah Haa waxay horay u lahaan jireen burush noocan oo kale ah, waxyaabo qaar xoqa oo sidaas darteedna u yareeya waxqabadka mootada isqabqabsi, abuura heerkul sarreeya, xirasho, buuq, waxayna u baahan tahay dayactirkan inay tahay inuu nadiifiyo boorka kaarboon ee ka soo baxa gudaha matoorka (kaas oo carqaladeyn karo oo kaliya howlgalka, waxay kaloo noqon kartaa mid tabinta oo keenta dhibaatooyin koronto) iyo beddel burush duugoobay.
Taasi waa sababta loo sameeyay matoorradii ugu horreeyay ee burushka. Marka hore berrinka matoorrada AC asynchronous, oo markii dambe u boodboodaya matoorro kale sida DC, kuwaas oo ah kuwa sida aadka ah noo daneynaya boggan.
Inkasta oo markii hore waxay ahaayeen kuwo cusub oo ka qaalisan Si loo soo saaro, horumarka tikniyoolajiyadda iyo elektaroonigga ayaa hadda suuragaliyay in la soo saaro dhaqaale ahaan. Si kastaba ha noqotee, xakamayntiisu waxay noqon kartaa mid aad u adag. In kasta oo ilaaliyayaasha xawaaraha ESC ay ciribtireen dhibaatooyinkan ...
Xilligan, matoorrada AC ayaa ku jira kooxo badan gudaha iyo warshadaha, iyo sidoo kale gawaarida, iwm. Sida CCs, waxaad sidoo kale ka heli kartaa iyaga akhristayaasha muuqaalka muuqaalka, taageerayaasha kombiyuutarka, drones, aalado, iyo dheer iwm.
Qaybo ka mid ah matoor aan burush lahayn iyo hawlgal
Runtu waa tan qaybaha matoor bilaa burush ah waa wax fudud. Iyada oo leh stator leh gaashaammada magnetka ee lagu sharaxay maqaalka matoorrada korantada, iyo rotor rogi doona wareegga sababo laxiriira aagga magnetka.
Laakiin habka loo adeegsado haa waxyar ayey ka duwan tahay kuwa kale ee burushka AC iyo DC. Si kastaba ha noqotee, mabaadi'da hawlgalka iyo astaamaha badan ayaa la mid noqon doona.
Si wax loo fududeeyo, ka ESC (Xakamaynta Xawaaraha Elektiroonigga ah), taasi waa, kantaroolayaashu inay awoodaan inay beddelaan kala-wareegga dabeylaha mootada aan burush lahayn si loo xakameeyo wareegga. Waxay u oggolaadaan in si fudud loo xakameeyo PWM, oo leh microcontrollers sida kan kujira arduinka Arduino.
Qaybaha 'ESC' waxay leeyihiin walxo elektaroonig ah oo awood u leh inay ku shaqeeyaan mashiinka iyaga oo aan dhib badan u keenin isticmaalaha. Iyada oo ku xidhan nooca mishiinka iyo korontada waxaad u baahan doontaa hal nooc ama mid kale wadaha, sidaan horeyba ugu falanqeynay qormooyinka kale.
Xusuusnow inaad xitaa isticmaali karto MOSFET transistors inaad daryeesho haddii aadan haysan qayb ka mid ah kuwan. Asal ahaan darawal ama ESC waa wareeg u oggolaanaya in lagu beddelo kala-soocidda transistors-ka si loo beddelo kala-baxa korontada ee mootada iyada oo ay ugu mahadcelinayaan transistors-yada iyagu sameeya.
inta u dhaxaysa faa'iidooyinka oo ka mid ah astaamaha gawaarida aan burushka lahayn:
Saamiga xawaaraha-xawaaraha fiican Sidaa darteed, waad ka soo saari kartaa waxqabad badan iyaga.
Jawaab firfircoon oo ka fiican.
Waxtarka tamarta badan, si loo keydiyo tamarta. Gaar ahaan muhiim u ah qalabka baytariga ku shaqeeya.
Kulayl yar. Looma baahna nidaamyo faafitaan oo dheeri ah ama xirnaan xad dhaaf ah.
Adkaysi badan, maxaa yeelay uma baahna dayactir aad u badan, mana laha khilaaf ama xidho.
Buuq yar. Way ka aamusan yihiin iyaga oo aan waxba taaban.
Xawaare sare, ku habboon codsiyada meeshii ay muhiim tahay, sida tartanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Is haysta In kasta oo awoodda ay leeyihiin, haddana iyagu aad ayey u isafgaradsan yihiin waxyaabo kale oo ka siman mashiinka burushka.
Dayactir la'aan. Ma yeelan doontid joogsiyo aan munaasib ahayn sababo la xiriira burushyada aad xirato, ama inaad iibsato qalabka dayactirka, nadiifiso boodhka ka soo baxa, iwm
Dabcan, matoorada bilaa burushka ah wax walba kuma fiicna. Waxay leeyihiin kuwooda yaryar faa'iido daro:
Kharash, waa wax yar ayuu ka sarreeyaa matoorrada burushka. Si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyadda hadda jirta waxay ka dhigan tahay inaad ku iibsan karto matoor burush ah qiimo wanaagsan.
Si aad u xakameyso, waxaad u baahan doontaa darawallo ama ilaaliyeyaal si aad u xakameyn karto wareegga. Suuragal ma ahan in gacanta lagu sameeyo sida xaaladaha kale.
Iyadoo ay taasi jirto, iyagu waa kuwaaWaxaan ku soo rogay warshadaha waxayna ka dhigeysaa mid mudan in la doorto midkood ...
Xagee laga iibsadaa matoor aan burush lahayn
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto iibso mooto aan burush lahayn si aad u dayactirto diyaaraddaada aan duuliye lahayn, ama mashruucaaga wax soo saaray, waxaad ka heli kartaa dukaamo gaar ah ama Amazon. Tusaale ahaan, waa kuwan alaabooyinka qaarkood:
4x matoorro aan caday lahayn oo loogu talagalay diyaaradaha DroneAcc
Gawaarida cadayga ee loo yaqaan 'Viviance Brushless Motor for Skateboard / Baaskiil koronto
Alomejor Mashiinka cadayga ee skateboard / baaskiil koronto
12v 150w matoor aan burush lahayn
Crazepony-UK Burushka aan biyaha lahayn
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Mashiinka aan cadayan: maxaad ka ogaanaysaa mootooyinkan
Faston: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabahaas
NVIDIA Jetson Nano: SBC oo loogu talagalay horumarinta shabakadaha neerfaha iyo AI